Dood: quruxda ka timaadda xanuunka; waa inaad aqbasho ama adkaysataa xanuunka ku meel gaarka ah si aad uga faa iideysato quruxda weligaa; taasina waa quruxda dhaqankeenna qaaliga ah, ee Druids-ka?
Posted By: KongoLisolowaa: July 18, 2020 00: 20 No Comments
Halyeeyga diinta Druids: Diinta Druid, waxaa loo sheegaa, sida ay qabaan caalimkooda, in Hu ay ku dhashey hay'ad samafal, waxaana dunida ku keenay Hooyo bikro ah oo la yiraahdo Mainz.
Mainz wuxuu metelay isagoo leh muuqaal leh iftiin kuna xidhnaa taaj laba iyo toban xiddigood ah, taas oo cadaynaysa inay ahayd metelaad xiddigtii Berenice / Dhismaha of Virgo, oo ah unugyada asal ahaan la xiriira Aïssata (Ast) ama Ishtar, Mainz, Maryantii bikradda ahayd iyo kuwa kale.
Sida uu sheegayo Gerald Massey, Stonehenge waxaa dhisay a Morien / Madoow. Arrintan, aqriso buugga cinwaankiisu yahay: "Bilaabida buugga".
Sida laga soo xigtay G. Adolf Koch, Druids-ku waxay ku dhaqmayeen caabudda "Great Luminary", oo ay Beltane Festival, oo sidoo kale loo yaqaan "Hoos u dhigga Qorraxda", runti waxay ahayd dhacdo astroolical ama astrology ah oo dhacday. Sebtember 21, 4468 MAY, markii deyrta, isugeynta qorraxdu ay la xiriirto Milky Way.
Waxa kale oo ay ahayd isku xidhnadan bilowdey dhaqdhaqaaqa qorraxda, Age of Gemini iyo Age of Taurus, isku mid ah oo lagu duubay saxanka Narmer.
Halyeeygaan Druids wuxuu leeyahay cabbir suugaaneed oo ku taal wadnaha quwaddooda. Waxa ku saabsan Maryantii bikradda ahayd ee Kitaabka Quduuska ah ee cutubka 12aad ee kitaabka Muujintii kama duwana halyeeygaan dhiig-baxa.
Sep27 03: 06
HI / LO: 21/19 ℃
HI / LO: 21/16 ℃
Horyaalka Premier League ayaa si toos ah oo dhameystiran u socda KL / Sport (xilli ciyaareedkii 2020/2021): Ha moogaanin kulanka Tottenham iyo Newcastle toos… (LIVE)
Sebtember 27, 2020 08: 55
Dhibaatada wiilka Christophe: Fernand Christophe, oo ah curadka wiilka General Henri Christophe, waxaa aabihiis u diray Paris gu'gii 1802 si uu halkaas ugu sii wato waxbarashadiisa, taas oo calaamad u ah daacad u ahaanshaha Faransiiska markii nabada u muuqatay la saxiixday General Leclerc, ka dib iska caabintii uu hogaaminayay Christophe iyo Toussaint-Louverture intii lagu jiray xilliga qaboobaha iyo bilowgii guga 1802
Sebtember 27, 2020 08: 08
Horyaalka Premier League ayaa si toos ah oo dhameystiran u socda KL / Sport (xilli ciyaareedkii 2020/2021): Ha moogaanin kulanka Sheffield United vs Leeds United toos (… LIVE)
Sebtember 27, 2020 06: 55
Jean-Jacques Dessalines, wuxuu ku dhashay addoon (1758-1806) magaalada Cornier, Grande-Rivière-du-Nord, qeybta faransiiska ee jasiiradda Saint-Domingue (Jamhuuriyadda Haiti) ee ku taal beerta Duclos, halkaas oo uu joogo wuxuu noqday taliye (masuul ka ah abaabulka shaqada addoonsiga); ka dib waxaa iibsaday farac afro bilaash ah oo la yiraahdo Dessalines
Sebtember 27, 2020 05: 55